विश्वभर ‘धूवाँरहित उद्योग’ भनेर पर्यटन उद्योगलाई चिनिन्छ । त्यही ‘धूवाँरहित उद्योग’ भनेर चिनिने पर्यटन उद्योगभित्र पर्ने होटल, मोटेल (नेपाल मोटेल हालसम्म भएनभएको यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन), कटेज, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, लज, होमस्टे नेपालमा फस्टाउँदो रूपमा धमाधम खुल्दै छन् । हुन पनि कुनै पनि देशका पर्यटकलाई अर्को देश वा अर्को ठाउँ जानेबित्तिकै उसलाई नभई नहुने पहिलो आवश्यक्त भनेको बास नै हो । बासका लागि नै होटल, मोटेल, कटेज, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, लज, होमस्टे आदि आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल जस्तो पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा होटल, मोटेल, कटेज, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, लज, होमस्टे आदि खुल्नु अनौठो भएन ।
अझ नेपाल जस्तो पदयात्रा अर्थात् ट्रेकिङ, पर्वतारोहण अर्थात् माउन्टेनियरिङ, भ्रमण अर्थात् ट्राभल, जलयात्रा अर्थात् -याफ्टिङ, बरफ आरोहण (एक दमै जमेको हिउँ जो नीलो देखिन्छ) अर्थात् आइस क्लाइम्बिङ, वन घुम्ने अर्थात् जंगल सफारी, निकुञ्ज, बन्जी जम्पिङ, चरा अवलोकन अर्थात् बर्ड वाचिङ, खेल पर्यटन अर्थात् स्पोर्ट टुरिज्म, फिसिङ, सिकार पर्यटन, हट एयर बालुनिङ, जिप फ्लाइएर, चट्टान आरोहण अर्थात् रक क्लाइम्बिङ, कायाकिङ, साइक्लिङ, मोटर बाइकिङ, हाईकिङ, स्काई डाइभ, माउन्टेन फ्लाइट, सांस्कृतिक भ्रमण अर्थात् कल्चरल टुर, औषधोउपचार अर्थात् मेडिकल टुर, ध्यान पर्यटन अर्थात् योगा टुर, गाउँ अवलोकन भ्रमण (यस्तो भ्रमण कुनै जाति विशेषको बसोबास भएको ठाउँमा गरिन्छ) अर्थात् भिलेज टुर, सहर अवलोकन भ्रमण अर्थात् सिटी टुर, सम्पदा अवलोकन भ्रमण आदिका लागि पनि धेरथोर विदेशी पर्यटकहरू आउने भएकाले नेपालको सहरबजारमा मात्रै नभएर गाउँगाउँमा पनि होटल खुल्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा गत वर्षको तथ्यांकअनुसार मात्रै पनि नेपालको होटलहरूले वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक धान्न सक्ने बेड क्षमता रहेको छ । तर, त्यहीअनुसार विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आएनन् भने होटल क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाउने त कता हो कता, सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन कठिन पर्ने देखिन्छ । धेरैले आफ्नै पकेटको पैसा भन्दा पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूसँग ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । त्यसमाथि सहर वा बजार क्षेत्रमा खुलेका ‘होस्टेल’ र ‘होम स्टे’हरू ठूला वा भनौं तारे होटलहरूका लागि प्रतिस्पर्धी रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा काठमाडौंलगायत सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमै ‘होस्टेल’ र ‘होम स्टे’हरू चलाउन दिनु हुँदैन ! भन्ने ठूला वा भनौं तारे होटलका सञ्चालकहरूले राखेको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो कि ?
नेपालमा हाल १५ वटा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आएका छन् । त्यस्तै चारतारे होटलको संख्या १३ छ भने तीनतारे होटल ३३ वटा छन् । उता दुईतारे होटलको संख्या पनि ४३ छ । एकतारे होटल ३५ वटा छन् भने पर्यटकस्तरीय होटलको संख्या ५ सय २७ छ । भनिन्छ, हाल होमस्टे मात्रै ५ सय ५७ वटा छन् । यसबाहेक होस्टल पनि सञ्चालनमा रहेको छ, जुन अवैध रूपमा चलेका छन् भन्ने भनाइ होटल व्यवसायीहरूको छ । यसले गर्दा तारे (ठूला होटल) होटलहरूलाई गेस्ट पाउन नै खडेरी पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
हुन पनि केही समयअघि आएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल गरेका छन् । यही आधारमा हेर्दा पनि हाल नेपालका होटलको बेड औसतमा दैनिक ४७ प्रतिशत मात्रै भरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जबकि सञ्चालन खर्च उठाउन पनि दैनिक ५५-६० प्रतिशत बेड भरिएको हुनुपर्ने भन्ने मान्यता छ ।